Malunga Nathi - KEYLASER GROUP LTD
I-Beijing KEYLASER SCI-TECH Co., Ltd. yasekwa kwi-2007, umenzi wezixhobo zonyango kwihlabathi jikelele uvelisa iimveliso eziphezulu zoogqirha beplastiki, i-dermatologist, oogqirha, kunye nabasebenzi bezempilo.
Umgangatho yinkcubeko yethu.
I-KEYLASER iphuhlise eyona mveliso inenkqubela phambili yokukhokela imakethi yehlabathi kwaye iimveliso zithengiswa kwihlabathi liphela ziiofisi zaphesheya.
I-KEYLASER isebenzisana namaqabane okusasaza kwihlabathi liphela ukubonelela ngolwaneliseko oluphezulu lwabathengi.
Ngomgca wemveliso othembekileyo obandakanya i-IPL, i-E-light, i-SHR, i-Diode laser, i-Multi-channel RF, i-RF microneedle, i-CO2, i-Diode laser, kunye ne-Q-Switch laser, i-KEYLASER ikhonza imboni njengenye yeenkampani ezikhokelayo ezinezinga elibukhali le-R & D. namava axabisekileyo.
Kwaye uye kwimiboniso emininzi minyaka le, ukwenza uphawu lwethu ludume kwihlabathi liphela
Iqela lethu le-R&D elikwaziyo ukulisebenzisa ukuphuhlisa iimveliso eziphucukileyo nezinobubele.I-OEM, i-ODM, iarhente yesitishi, umsasazi, okanye ezinye iindlela zentsebenziswano.Siye saba namava amaninzi ayimpumelelo kwaye sinomnqweno onamandla wokuphuhlisa ubambiswano olusondeleyo lweshishini kunye nawe ukuze sixhamle kunye nenkqubela phambili.
Siphuhlisa uyilo olutsha lwenkangeleko kunye nesoftware entsha yeematshini ezahlukeneyo zobuhle.Isebe lethu leR&D lisebenza ngokusondeleyo namahlakani ethu ehlabathi
Inkampani yethu ikhule ngesinye kwisithathu.
Inkampani yahlulwe yangamasebe ahlukeneyo, ngalinye linomlawuli walo.Isebe leNtengiso kunye neNtengiso liquka iqela leentengiso, kunye neenkonzo zabathengi.Isebe loLawulo likwabandakanya iHuman Resources.
Siziinkokheli zentengiso kumazwe amathathu.kwaye siye sandisa imisebenzi yethu kwihlabathi liphela kumazwe ali-180
Kunyaka ka-2020, sinabasasazi abakhethekileyo kwamanye amazwe,
Sisebenzisana neeofisi zethu kwihlabathi liphela.
Ubuchwephesha kunye nobugcisa